Thin client Network အသုံးပြု့သူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံ လေးတေ&#41 — MYSTERY ZILLION
Thin client Network အသုံးပြု့သူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံ လေးတေ&#41
Thin Client Network နဲ့ပတ်သက်ပီး အတွေ့အကြုံ များ, ပြသနာများ, လိုအပ်ချက်များကို ညီတော်အား ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ် ထင်မျာ:D
thin network တွေ thick network တွေရှိလို့လား
Before you install Thin Client Console ( Device ) , you may need to prepare some server first such like * DHCP , FTP , Terminal Clients.
Its up to you which kernel ( OS ) you want to use, you need to prepare boot kernel on FTP server. In DHCP Option, you need to define that which is FTP , VPN or Terminal Client IP, DNS if you want to give access to Internet.
As I mentioned, based on your OS kernel, you can create user account and permissions and access.
Bro , hopefully you can make it on your way which purpose you like to use it.
thin client ဆိုတာ client နဲ့ server စံနစ်ကိုသုံးတဲ့ network တစ်ခုရဲ့ client computer (ဒါမှမဟုတ်) client software ကိုပြောတာပါ။ thin client အပြင် lean client တို့ slim client တို့လို့လဲ အခေါ်အပြောရှိကြပါသေးတယ်။ ဒေတာတွေ သိပ်အသွင်းအထုတ်မများတဲ့ client မျိုးကိုဆိုလိုတာပါ။ thin client တွေဟာ web browser တို့၊ remote desktop client တို့လောက်နဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ ဒေတာတွေ အသွင်းအထုတ်များလာရင်တော့ thick client (ဒါမှမဟုတ်) fat client အုပ်စုထဲ၀င်သွားမှာပါ။
ဒီတော့ကာ thin client တစ်ခုအနေနဲ့ ကိုယ်သုံးရတဲ့ server နဲ့ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ OS အပေါ်အခြေခံပြီး ကြိုက်ရာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ Windows XP ကို terminal server လုပ်ပြီး၊ client တွေကတော့ remote desktop တွေနဲ့ သုံးနေဆဲပါ။ ကွန်ပျူတာ အလုံး ၂၀ လောက် ကို နက်၀ါ့တစ်ခုလုပ်ထားပြီး သုံးနေတာပါ။ စကင်နာတို့ ပရင့်တာတို့ကို ဆာဗာမှာပဲထားတာပေါ့။ XP ကလဲ concurrent remote desktop ရအောင် crack လုပ်လိုက်ရင် အတော်သုံးလို့ကောင်းပါတယ်။
Thanks for your reply bro:6:
Now can u please tell me what are the benefits and harms of thin clients network in business.:77:
ဒါမျိုးလေးနဲ့ Solaris ကို DataCenter မှာတင်ထားရင်
Terminal တစ်ခုထဲကနေ OS သုံးမျိုးလောက် (Linux, Windows, OSX)
တစ်ပြိုင်နက်ထဲ Run နိုင်သလို
Admin တစ်ယောက်ထဲနဲ့ Computer တစ်ထောင်လောက်ကို ထိုင်ရာမထပဲ
service ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲ.... ကိုယ့် desktop computer ရဲ့ RAM တွေ
Processor တွေရဲ့ Limitation တွေ လုံး၀မရှိတော့ဘူးဗျို့။
အဲသလို server မျိုးတွေ ခြင်း ချိတ်ထားလိုက်ရင်
(utility computing enabled လုပ်ထားရင်)... terminal ထဲကနေ Super
Computer ပေါ်မှာ ထိုင်နေရသလိုပါပဲ။ :O
ADSL connection တော့ လိုသပေါ့။
ကျွန်တော် တို့သိထားတဲ့ Thin Client တွေမှာရှိတဲ့ ဒေတာ အသွင်းအထုတ်
နည်းရမယ်ဆိုတဲ့ Limitation တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်လောက်ကနေ
ခုထိ ယုံကြည်နေတဲ့ အရာတွေပါ။ အခု ခေတ် လို (Google, FaceBook) Data ကို
server ထဲမှာပဲသိမ်း။ computation ကိ်ု server ထဲမှာ ပဲလုပ်၊
လိုအပ်လာတဲ့ resource ကို Grid တွေပေါ်မှာ share လုပ် balance လုပ်မယ်ဆိုရင်
Windows XP ကြီးကို Run ပြီး remote desktop သုံးလေးခု run ဖို့အတွက်
computer ဆိုတာကြီး ကိုယ့်ဆီမှာ လိုပါဦးမလား.....စဉ်းစားစရာတွေပေါ့နော။ :5:
Sun ရဲ့ one of the Best Kept Secrets တွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ပါပဲ။ :39:
ဒါပေမယ့် .... ဒါပေမယ့် ..... ဆိုတာကတော့.... သို့သော်တဲ့...
သို့သော်ဆိုတာကတော့.... မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူပေါ့လေ..... :d